Raha tsy misy fanaraha-maso antso, ny fampielezan-kevitra fampielezankevitra anao dia mitombo tsy marim-pototra | Martech Zone
Raha tsy misy fanaraha-maso ny antso dia mitombo tsy marina ny fanentanana nataonao
Sabotsy, Oktobra 18, 2014 Alakamisy 5, 2015 Douglas Karr
Manana mpanjifa orinasa manana departemanta maromaro ao anatin'ny marketing izahay… fifandraisana amin'ny daholobe, haino aman-jery nentim-paharazana, fanatsarana motera fikarohana, marketing amin'ny finday, fampandrosoana ny atiny sy maro hafa. Nandritra ny taona lasa, fantatray fa nitombo avo roa heny ny fifamoivoizana sy ny fanovana ny SEO sy ny atiny satria Analytics dia tafiditra tsara ao amin'ilay tranonkala.
Misy olana goavana anefa. Ny departemantan'ny varotra ataon'izy ireo dia mampiasa laharana finday mitovy amin'ny fampielezan-kevitra rehetra na inona na inona medium. Ny valiny dia izay rehetra miantso ao amin'ny orinasa dia omena tsy misy fepetra amin'ny media mahazatra. Na dia tsy misy fisalasalana aza fa ny media nentim-paharazana dia mitondra antso, ny mpanjifa kosa dia mihevitra loatra ny fiantraikany ary manambany ny fiantraikan'ny haino aman-jery nomerika satria tsy ampy izy ireo fanaraha-maso antso.
Inona no atao hoe Tracking Call?
Ny ankamaroan'ny orinasa antonony sy lehibe dia manana rafi-telefaona mamela ny antso an-tariby maro hivezivezy anaty anaty amin'ny orinasa iray. Misy ny sehatra ankehitriny izay ahafahanao manara-maso marina ny loharanon'ny fampielezana antso an-tariby amin'ny fanovana ny laharana telefaona ho an'ny fampielezana tsirairay. Ny mailaka mivantana dia mety misy nomeraon-telefaona iray, tranokala iray nomeraon-telefaona iray, dokambarotra fahitalavitra iray ary nomeraon-telefaona iray hafa.
Misy ny serivisy ahafahan'ny orinasa manisy nomeraon-telefaona manokana amin'ny fampielezan-kevitra sy mampiasa azy ireo hanarahana ny antso marina. Ireo sehatra ireo dia nivoatra ary afaka manome ny marina kokoa - manova ny nomeraon-telefaona amin'ny tranokalanao mifototra amin'ny loharano referral mba hahafahanao manara-maso tsara ny fikarohana, ny sosialy, ny mailaka ary ny fanentanana hafa. Antsoina izany fanompoana izany fanaraha-maso antso (Bebe kokoa: fanazavana video momba ny fanarahana antso).
Fa maninona no ampiasaina amin'ny fanarahana antso?
miaraka Smartphone roa tapitrisa mahery amin'ny fampiasana manerantany, ny dia ho an'ny mpanjifa dia mihasarotra hatrany, miaraka amin'ireo olona mifindra eo anelanelan'ny finday, birao, tsindry ary antso. Manohy mampifandray ny tranonkala amin'ny finday ihany koa ny teknolojia. Fitaovana maro no mamaritra ny nomeraon-telefaona amin'ny rindranasa sy ny mpizaha ary afaka tsindrio fotsiny ianao hiantsoana azy ireo. Ary koa, azonao atao hyperlink nomeraon-telefaona iray ao anatin'ny tontolon'ity tranonkala ity. iPhone dia namoaka fampiasa izay manitatra ny finday avo lenta amin'ny birao findainao mba hahafahanao mampiasa ny solosainanao hanaovana antso an-tarobia.
The fantsona fiantsoana miditra mitombo haingana, fa ny mpivarotra tsy manana sary mazava iza amin'ireo fampielezan-kevitra no mitondra ny kalitao avo indrindra. Ny tsy fananana angon-drakitra ahafahana mampifandray fifandraisana isan-karazany amin'ny Internet sy ivelan'ny Internet, toy ny antso, dia mety handany vola amin'ny orinasa an-tapitrisany amin'ny vola miditra tsy azony. Ity infographic avy amin'ny fiantsoana manome ny mombamomba ny antony tokony hieritreretan'ny mpivarotra ny angon-drakitra momba ny varotra amin'ny lafiny roa amin'ny antso sy tsindry.
An ebook miaraka aminy manome toro-hevitra azo ampiharina momba ny fomba ahafahan'ny mpivarotra manampy ny faharanitan-tsaina amin'ny antso ao am-paosin'izy ireo, manatsara ny antso toa ny tsindry hitarika kalitao avo lenta kokoa.
Ao amin'ny finday iray tsy mandeha an-tany, Invoca dia manome intelligence intelligence amin'ny rahona marketing hanampiana ireo mpivarotra hitondra antso anaty ary hamadika azy ireo ho varotra. Ny sehatry ny Invoca dia manome ny faharanitan-tsaina antso ho an'ny mpivarotra mba hisambotra sy hanatsara ny fifandraisan'ny mpanjifa sy ny varotra mihoatra ny tsindry. Manomboka amin'ny lozisialy ka hatrany amin'ny tanjona, ny mpivarotra dia mahazo fahatakarana feno ny dian'ny mpanjifa manerana ny sehatra nomerika, finday ary ivelan'ny Internet mba hahafahan'izy ireo manatsara ny vola laniny amin'ny marketing, mitondra antso anaty kalitao ary hanome traikefa ho an'ny mpanjifa tsara kokoa.
Tags: Attributionfanaraha-maso antsoSary torohayinvocanomeraon-telefaonafanaraha-maso finday
Ny dingana fototra 5 amin'ny fananganana ny lisitry ny mailakao
BlackBox: fitantanana risika ho an'ny spam amin'ny ady amin'ny spam
Dec 30, 2014 amin'ny 4: 59 AM
Lahatsoratra mahafinaritra! Miombon-kevitra tanteraka aminao aho fa misy fiatraikany lehibe ny fanaraha-maso ny antso ary manampy ny orinasa hanombatombana ny fahombiazan'ny fampielezan-keviny amin'ny marketing amin'ny fotoana tena izy ary mamela azy ireo handray fanapahan-kevitra haingana sy sahaza mba hampitomboana ny ROI.
Misaotra tamin'ilay lahatsoratra tsara!
Dec 31, 2014 ao amin'ny 6: PM PM
Miloka ianao! Ankasitraho ireo teny tsara.